Wednesday April 17, 2019 - 19:29:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta ka dhacay goob ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo oo dacalkanku haysa wadada Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho.
Qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu weeraray isku imaatin kuyaalla afaafka hore ee saldhigga degmada Waabari halkaas oo ay joogeen saraakiil ka tirsan ciidamada Police-ka iyo kuwa nabadsugida iyo shaqaale katirsan DF.
Qaraxan oo ahaa mid aad u xooggan oo jugtiisa laga maqlay meelo badan oo kamid ah Muqdisho ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiisha la beegsaday iyo shaqaalaha DF.
Sarkaal u hadlay Xarakada Al-Shabaab ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in qaraxan lagu beegsaday goob ay fadhiyeen saraakiil ka tirsan DF ku taalla afaafka hore ee saldhigga Waabari oo ku dhow isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho.
"khasaaraha dhimasho ee murtadiinta kasoo gaartay qaraxii maanta ayaa gaartay iyo dhaawaca 14 kale " ayaa lagu yiri warka lagasii daayay Idaacadda Andalus.
Qaraxan ayaa dhacay saacado uun kadib markii qarax kale oo ka dhacay wadada Maka AlMukarama uu si dirqi ah uga badbaaday sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Nabad Sugidda islamarkaana ahaa taliyaha Nabad Sugidda maamulka Galmudug.
Saraakiil katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in uu sarkaalkaas ka badbaaday qaraxa balse lagu burburiyey gaari Roneet ah oo uu watay.
Waa Qaraxii labaad oo maanta oo kaliya ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada aadka loo ilaaliyo ee Makka AlMukarama iyadoo muddo todobaadyo ah ay waddooyinka u xiran yihiin maleeshiyaatka DF kuwaas oo ku andacoonaya in ay wadaan howlgallo looga hortagayo weerarada Al-Shabaab.
Laakiin Inkastoo ciidamada amaanka ee DF ay xireen dhamaan waddooyinka magaalada ayna qaadeen baaritaano amni oo ay sheegeen in lagu soo afjarayo weerarada Xarakada Al-Shabaab ee caasimadda, hadana weli waxaa goobaha aadka loo ilaaliyo ee caasimada ka dhacaya qaraxyo waaweyn oo ay Al Shabaab ku taxadinayaan sheegashooyinka xukuumada taagta daran ee Farmaajo.